Ị nọ ebe a: Home / Archives maka Nigeria
Oge ochie na-echebe nri - The Desert Refrigerator
Nigeria - Nkà na ụzụ oge ochie na-echebe nri. Enweghị ọkụ eletrik. Enwere ike ime maka $ 4.00. Nọgidere na ntụgharị nchịkwa 14 karịa gburugburu gburugburu ebe obibi.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Ndozi Nlekọta Tagged With: Nigeria